के तपाईलाई थाहा छ ? यसरी गर्न सकिन्छ औषधिको रुपमा दालचिनीको प्रयोग
डिसेम्बर 12, 2018 डिसेम्बर 12, 2018 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments	औषधि, डा. राम बहादुर बोहरा, दालचिनी
सामान्यतया: दालचिनीलाई हामी मसलाको रुपमा प्रयोग गर्छौं । तर, दालचिनी खासगरी ज्वरो, ब्रोनकाइटिस, दम तथा मुटु सम्बन्धी रोगमा निकै लाभदायक हुन्छ । यस्ता औषधितर्फ विश्वास कम हुने हुनाले मानिस घरेलु उपचारबाट बन्चित भएका छन् यसको प्रत्यक्ष फाइदा विदेशीलाई पुगेको छ । हाम्रो नेपालमा जडिबुटीतर्फ कसैको ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन ।
आजको आधुनिक युगमा परम्परागत औषधिबारे धेरैलाई विश्वास नलाग्न सक्छ । विश्वास लागेपनि जडिबुटी र औषधिको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने उपयोगी बोटविरुवा हिमाल तथा पहाडी भेगमा मात्र पाइन्छ भन्ने भ्रम हुनसक्छ । तर, हाम्रो घरखेतमै यस्ता औषधिजन्य बोट-विरुवा सजिलै पाइन्छन् । जसबारे थाहा पाइराखेमा समस्या परेको बेलामा राहत प्रदान गर्छ । बेल, नीम मेहन्दी, पुदिना, तुलसी हाम्रो वरिपरि पाइने खालका औषधि हुन तर यसको प्रयोग गर्न नसक्दा ठूलो धनराशी बाहिर गएको छ । औषधिको रुपमा दालचिनीलाई निम्न अनुसार प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
← विरामीप्रति डाक्टरको भुमिका
तुलसीको धार्मिक महत्व →
सेप्टेम्बर 11, 2018 डिसेम्बर 11, 2018 साइन्स इन्फोटेक	9
जुलाई 9, 2019 जुलाई 9, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0
मार्च 21, 2019 मार्च 22, 2019 साइन्स इन्फोटेक	1